A họpụtara ụmụ nwoke asaa ga na-eje ozi (1-7)
E boro Stivin ebubo na ọ na-ekwulu Mosis na Chineke (8-15)
6 N’otu oge, mgbe ndị na-eso ụzọ Jizọs na-ehikwu nne, ndị Juu na-asụ Grik malitere ime mkpesa na ihe ndị Juu na-asụ Hibru na-eme adịghị mma, n’ihi na a naghị ekenye ụmụ nwaanyị isi mkpe ha* ihe ndị a na-eke kwa ụbọchị.+ 2 N’ihi ya, ndịozi iri na abụọ Jizọs kpọkọtara ìgwè ndị ahụ na-eso ụzọ Jizọs wee sị ha: “Anyị ekwesịghị ịhapụ okwu Chineke anyị na-akụzi gaa kewe nri na tebụl.+ 3 N’ihi ya, ụmụnna anyị, họpụtanụ ụmụ nwoke asaa ndị nwere aha ọma,*+ ndị mmụọ nsọ na-achị, ndị makwa ihe,+ ka anyị gwa ha ka ha na-ahụ maka ọrụ a dị mkpa.+ 4 Ma anyịnwa ga na-ekpe ekpere mgbe niile, na-akụzikwara ndị mmadụ okwu Chineke.” 5 Ihe a ha kwuru masịrị ìgwè mmadụ ahụ niile, ha ahọrọ Stivin, bụ́ nwoke okwukwe ya siri ike na onye mmụọ nsọ na-achị. Ha họkwaara Filip,+ Prọkọrọs, Naịkenọ, Taịmọn, Pamenas, na Nikọleọs, onye Antiọk na-ekpebu okpukpe ndị Juu.* 6 Ha wee kpọtara ha ndịozi ahụ. Mgbe ndịozi ahụ kpechara ekpere, ha bikwasịrị ha aka n’isi.+ 7 N’ihi ya, okwu Chineke nọ na-agbasa,+ ndị na-eso ụzọ Jizọs nọkwa na-ehikwu nne n’ike n’ike+ na Jeruselem. Ọtụtụ ndị nchụàjà ghọkwara ndị na-eso ụzọ Jizọs.+ 8 Ma ebe Chineke meere Stivin amara, nyekwa ya ike, ọ nọ na-arụrụ ọtụtụ ndị ọrụ ebube. 9 Ma ụfọdụ n’ime ndị òtù a na-akpọ Ndị Nweere Onwe Ha bịara, ha na ụfọdụ ndị Saịrini na ndị Alegzandria na ụfọdụ ndị si Silishia na Eshia, ka ha rụọ Stivin ụka. 10 Ma, ha agbaghalighị ihe ọ na-ekwu n’ihi na ọ nọ na-ekwu okwu otú gosiri na ọ ma nnọọ ihe, mmụọ nsọ nọkwa na-enyere ya aka.+ 11 Ihe ha meziri bụ ịgwa ụfọdụ ụmụ nwoke na nzuzo ka ha kwuo, sị: “Anyị nụrụ ka ọ na-ekwulu Mosis na Chineke.” 12 Ihe a ha kwuru kpasuru ìgwè mmadụ na ndị okenye na ndị odeakwụkwọ iwe, ha abịa ozugbo, kpụrụ ya n’ike kpụga na Sanhedrin.* 13 Ha kpọpụtakwara ndị akaebe ụgha, ndị sịrị: “Nwoke a na-ekwukarị okwu ọjọọ gbasara Iwu Mosis nakwa ebe nsọ a. 14 Dị ka ihe atụ, anyị nụrụ ka ọ na-ekwu na Jizọs a bụ́ Onye Nazaret ga-akwatu ebe a ma gbanwee omenala anyị ndị si n’aka Mosis.” 15 Ka ndị niile nọ na Sanhedrin* legidere ya anya, ha hụrụ na ihu ya dị ka ihu mmụọ ozi.
^ Ya bụ, ụmụ nwaanyị isi mkpe ndị na-asụ Grik.
^ Ma ọ bụ “ụmụ nwoke asaa ndị a na-ekwu okwu ọma gbasara ha.”
^ Ma ọ bụ “a tọghatara atọghata.”